downloads 7 970
Emelitere na 24 / 02 / 2013: Version 2.2
Complete ịme anwansị nke Piaggio PD-808 maka FS2004 (pịa ebe a n'ihi na FSX ụdị). Agụnyere usoro dị adị na njikwa engine dị elu. Ihe ngosi a gosiputara kokpiiti nke ime ihe omumu nke 3D na ogwe 2D Da dị mma.
The n'èzí nlereanya nwere niile dị mkpa animations na ndị ọzọ! Full n'abalị ọkụ, atọ textures, gụnyere a mbipụta pụrụ iche nke "Batman".
Esere akụkụ, a na-eme ụgbọelu a nke ọma, ihe add-on ọ ghaghi inweta.
Rịba ama na a dị ezigbo mma English akwụkwọ a gụnyere.
Fairchild C-123 K Provider ngwugwu n'ihi na FS2004